Abavelisi beCalcined α-Alumina - iTshayina iCalcined α-Alumina abathengisi kunye neFektri
Yodongwe Granular Powder ...
I-Sodium ephantsi yeCalcined Alumina (HA) yePowder Powder erhabaxa
Iqela le-YUFA lityale imali eninzi kuphando lobuchwephesha kumzi mveliso we-alumina esezantsi.
Sivelise ubuchwephesha obuphambili kwilizwe liphela obunobuncinci besodium ekuphenduleni kwiimfuno zentengiso ene-sodium alumina, ethe yafezekisa ngokufanelekileyo ulwenziwo.
Umxholo we-Na2O ungangaphantsi kwe-0.01%
2. Ilungele izicelo ezahlukeneyo zemveliso
Isodium esezantsi Calcined Alumina (CA) Uthotho lweeCeramics
Iqela le-YUFA linokuvelisa uthotho lwee-ceramics alumina uthotho oluchanekileyo oluchanekileyo lokutshisa ukusasaza, ukucofa i-isostatic, okanye ukucofa okomileyo kunye nenye inkqubo yokubumba.
1. I-Sodium ephantsi, engaphantsi kwe-0.1%.
2. Ukucoceka okuphezulu kweAlumina
3. Crystal ubungakanani ungenziwa ngemfuneko
Calcined Alumina (RA) Uthotho lwezixhobo ezingaPhikisi
Iqela le-YUFA liphuhlise ukusebenza okuphezulu kwe-alumina esekwe kwiminyaka engama-30 yamava emveliso.
I-calcined alumina refractory raw materials eveliswa kukusetyenziswa kwetekhnoloji yemveliso ekhethekileyo kunye ne-rotary eqhubayo kunye nezixhobo zetonela ezithengisa kakuhle kwiimarike ezingaphezu kwe-40 zaphesheya.
1. Ngobuninzi bexineneyo, nciphisa ukusetyenziswa kwamanzi okungafunekiyo okwenziwa kwakhona
2. Ikristale yoqobo incinci ngobukhulu, inemisebenzi yokuntywila ephezulu kunye nokuzinza kwevolumu
3. Ukunciphisa okanye ukubuyisela inani lezinye iipowder ze-ultra-fine kwaye uphucule iipropathi ezinobushushu obuphezulu boomatshini bokuchasana
Calcined Alumina (PA) Uthotho lokucoca
I-alumina ye-calcined calcined iveliswa kubungakanani obahlukeneyo ngokusekwe kwimfuno yomthengi. Uthotho
1.Uchungechunge oluhle lokucoca: Ikristale yoqobo ingaphantsi kwe-1 μm 2. Medium wokucoca series 3. Ezizodwa ngokukrola okurhabaxa okumfusa
Calcined Alumina (FA) Series for Ubushushu Conduction
I-Alumina inezibonelelo zokuhambisa ubushushu kunye nokugquma, kwaye inokusetyenziswa njengesixhobo sokuzalisa esisebenza ngobushushu sokulungiselela iglu yokuhambisa ubushushu, ukubumba iglu kunye nezinye izinto zepolymer.
Alumina Therm conductive na ngumgubo emhlophe yikristale eveliswe phantsi kweqondo lobushushu eliphezulu. Zininzi iipowder ze powsters. I-alumina esetyenziselwa ukuqhuba kwe-thermal ibandakanya i-alumina engqukuva, i-quasi-spherical alumina, kunye ne-alumina edibeneyo.
1. Ukuhanjiswa kobungakanani beengqungquthela ezinengqiqo, izinga lokuzalisa eliphezulu, i-viscosity ephantsi kunye nomxube olungileyo we-fluidity unokufumaneka
2. Ukuqhutywa kwe-thermal okuphezulu, xa kuthelekiswa ne-crystalline silicon, i-thermal conductivity yomxube iphezulu
3.Ubrasion ephantsi: imbonakalo ingqukuva, kunye nokukrala komxube kunye nokubumba okuncinci
4. Umxholo we-sodium ne-chlorine ion-like impurities uncinci kakhulu, kwaye unokumelana nokufuma kombane
I-Low-Sodium Calcined Alumina (SA) Uthotho lweeGlasi ezikhethekileyo
Iqela le-YUFA α-Alumina isebenzisa inkqubo eyahlukileyo yokubala kwaye ineempawu zokucoceka okuphezulu, umxholo ophantsi we-Fe2O3. Yeyona nto iphambili ekrwada ye-substrate yeglasi ye-LCD kunye neglasi ye-aluminium ephezulu.
1. Ukucoceka okuphezulu kunye nokungcola okungaphantsi.
2. Inqanaba eliphezulu lokuguqula isigaba se-alpha.
ICeramic Granulation Powder (GA) Uthotho lweAlumina Ceramics
Iqela le-YUFA likhetha ubumsulwa obuphezulu be-alumina kunye nobungakanani be-particle efanelekileyo, esebenzisa uxinzelelo okanye indlela yokutshiza i-centrifugal ukuvelisa i-92, 95, 99, 99.5 kunye nezinye izinto ze-granulating powder. Kufanelekile ukuba ucinezele owomileyo, ukunyathela ngokukhawuleza, ukucofa i-isostatic kunye nezinye iinkqubo.
1. Ubushushu bokwakha obuphantsi kweceramic
2. Ukungqinelana komgubo olungileyo
3.Uxinano oluphezulu, akukho zikroba ekubunjweni kweceramic
Iqela le-YUFA likwajolise kwimveliso ye-plug plug insulators zetyhubhu, iityhubhu ze-porcelain, izinto ezitshisa ioyile kunye nezinye iimveliso. Inokuvelisa iiplagi ezahlukeneyo, iityhubhu zeceramic kunye nezinye iimveliso ezinobude obungaphantsi kwe-150 mm.
1. Ukuxinana okuphezulu
3. Ukuxhathisa okuhle kombane
4. Ukuhambelana kobungakanani obulungileyo